ဤရောင်းအား၏တစ်ခုတည်းသောရှုထောင့်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၄ သန်းဆုံးရှုံးစေနိုင်သည် Martech Zone
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 5, 2014 Douglas Karr
ထုတ်လုပ်မှုမှရရှိသော ၀ င်ငွေဖြင့်ရောင်းအားအကြောင်းပြောလေ့ရှိသော်လည်းအဆင်မပြေသောအခါဆုံးရှုံးမှုများမဟုတ်ပါ။ အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ကုမ္ပဏီအများစုတွင်အားကစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရောင်းပညာရှင်များသည်အရှိန်မြှင့်ရန်၊ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားပြောင်းလဲရန်စိတ်ပညာအနည်းငယ်သာရှိကြသည်။ The အရောင်းမန်နေဂျာ ၀ န်ထမ်းများကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီရန်နှင့်ကျော်လွန်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်နှင့်မောင်းထုတ်ရန်မတတ်နိုင်သောအနေအထားပင်ရှိသည်။ မှားယွင်းသောမန်နေဂျာထဲကို ၀ င်ပြီးအရောင်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး လုံးအမှားလုပ်မိနိုင်သည်။ အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုအာရုံစိုက်တာ၊ ဒေတာ ၀ င်တာ (သို့) ရောင်းအားကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ bailiwick ပြင်ပမှာမြှင့်တင်တာတွေကိုကြည့်ပြီးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနည်းပညာသည်သင်၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများအားကူညီရန်နှင့်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာနှင့်ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကအတားအဆီးတွေကိုမဖန်တီးပေးသင့်ဘူး၊ ဖယ်ရှားသင့်တယ်။ ငါတို့ချစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲ အရောင်းအဝယ် ဤမျှလောက်ပလက်ဖောင်း (ကစပွန်ဆာ) ။ အရောင်း ၀ န်ထမ်းများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှစ်ခုစလုံးအတွက် Salesforce သို့၎င်းတို့၏ dashboard သည်ရောင်းအားနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်အစီရင်ခံရန်အချိန်ကိုသိသိသာသာလျော့ချစေသည်။
အရောင်းမန်နေဂျာများစွာသည် ၄ ​​င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများထံမှဖွံ့ဖြိုးမှုအထောက်အပံ့များကိုအနည်းငယ်သာရရှိသည်။ ၎င်းတို့အစားစီမံခန့်ခွဲမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ထုတ်ကုန်များရောင်းဝယ်ခြင်းမှကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုစသည့်စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ၄ င်းတို့၏မန်နေဂျာများ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသောအဖွဲ့အစည်းများအနက်အများစုသည်မန်နေဂျာများကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိရောက်စေရန်လိုအပ်သောစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မဟာဗျူဟာကျသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုပျက်ကွက်ကြသည်။ ၎င်းသည်မန်နေဂျာများအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရုံသာမကရောင်းသူများကိုလည်းထိရောက်မှုနည်းစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကုမ္ပဏီ၏အောက်ခြေကိုထိခိုက်စေသည်။ ဂျက်စီကာငွေ၊ စီအဲလ်ဂလိုဘယ်အတွက် Solution Development & Innovation ၏အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ.
အဓိကအချက်မှာပျက်ကွက်သောမန်နေဂျာတစ် ဦး သည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးမှု၊ အသင်းအဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခြင်း၊ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံနည်းပါးခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ လစာနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီအားဒေါ်လာ ၄ သန်းအထက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဤတွင်တစ် ဦး ပျက်ပြားပါတယ် ဘယ်လိုအရောင်းမန်နေဂျာကျရှုံး.
Tags: မကောင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုသောအခါceb ဘလော့ဂ်များဆုံးရှုံးမအောင်မြင်ခြင်းJessica ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်အရောင်း dashboardအရောင်းစွမ်းအားရောင်းအားဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်ရောင်းအားကုန်ထုတ်စွမ်းအားရောင်းအားစုဆောင်းမှုအရောင်းအစီရင်ခံခြင်းရောင်းရငွေအရောင်းအဖွဲ့အရောင်းသင်တန်းအရောင်းအဝယ်
ရည်ရွယ်ချက် - မောင်းနှင်လူမှုရေးစျေးကွက်၏ Rise